Geekbench 3 ho an'ny iOS dia misy maimaim-poana | Vaovao IPhone
Nanapa-kevitra ny hanao ny fampiharana azy malaza indrindra ny Geekbenc 3, ny developer Primate Labs. maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra ho an'ny iOS ao amin'ny App Store. Ity rindranasa ity dia manolotra anay lisitra feno momba ny angon-drakitra sy rindrambaiko manan-danja indrindra amin'ny fitaovan'ny iOS, ary koa mandrefy ny hafainganana sy ny hafainganam-pandehan'ny fikirakirana ary ny fahatsiarovan-tena momba ilay fitaovana. Natao hamonoana haingana sy haingana araka izay azo atao izy io, noho izany dia tsy fitaovana voafetra ho an'ny matihanina amin'ny sehatra io, lavitra azy io. Iray amin'ireo fampiharana azo itokisana sy malaza indrindra amin'ny tontolon'ny finday avo lenta handrefesana ny herin'izy ireo, raha ny marina isaky ny fanombohana fitaovana vaovao dia mahazatra ny mahita an-jatony amin'ireo kajy ireo amin'ny tambajotra.
Izy io dia rindranasa Iraisam-pirenena, ary koa mifanaraka tanteraka amin'ny iOS 9, iPhone 6s ary iPhone 6s Plus. Mampalahelo fa amin'ny teny Anglisy ihany izy io, saingy intuitive be loatra ka tsy ho lasa dingana sarotra resena ilay fiteny. Ny fampiharana dia eo amin'ny kinova 3.4.0 amin'izao fotoana izao ary ny fanavaozam-baovao farany dia tonga tamin'ny 9 Oktobra tamin'ity taona ity, miaraka amin'ireo fitaovana iPhone farany indrindra. Raha ny habeny dia maivana izy, 12,5 MB fotsiny no ampy hampidina sy hampandeha azy amin'ny fitaovantsika.
Izy io dia nahazo laza eran-tany sy fanamarihana tsara tao amin'ny App Store, ary maimaim-poana, farafaharatsiny afaka manampy antsika hampidina azy io na dia tsy mila izany aza isika izao, dia hotahirizintsika ao amin'ny fividianana iTunes foana izany, koa isika hanana azy io maimaim-poana mandrakizay. Tsy manana dokam-barotra na fandoavam-bola tafiditra, noho izany dia fotoana mety izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Geekbench 3 ho an'ny iOS dia misy maimaim-poana
Nanatevin-daharana an'i Apple i Stevie Wonder hiarahaba antsika amin'ny Krismasy
Fampiharana fivarotana maimaim-poana sy voafetra ho an'ny Zoma Mainty